Itafile encinci yevase yefektri - China Abavelisi betafile encinci abenzi, abaxhasi
Ukuhonjiswa kweDollhouse】 Yeyona ndlela intle yokufikelela kwiDolhouse yakho oyithandayo! Fumana oku njengokongezwa kuseto kwindlu yakho yedoli, okanye ngokwakho! Kuquka yonke into onokuyidlala ukuze uzenze.
Gift Isipho esigqibeleleyo】 Amanani aDlalayo aDlalwayo aDlamkileyo alungile kwizandla ezincinci! Ilungile kumdlalo wokudlala kunye nokongezwa ngokugqibeleleyo koQokelelo lwawo lweDola.
Toy Uphuculo lwento yokudlala】 Ezi zinto zidlalwayo zithandekayo zikhuthaza ukukhula kwengqondo okunempilo ngokuzenzisa. Ukudlala amabali amabali kuya kwenza iinkqubo ezilandelelanayo kunye neendlela zokucinga, ngelixa izakhono zemoto kunye nobuchule buphucuka njengoko abantwana bexhaphaza imeko yolonwabo.
Izixhobo ezikhuselekileyo】 Ukugqitywa okungekho yityhefu kunye nezinto ezikhuselekileyo zomntwana.
Qaphela】 Le nto ayibobungakanani bobomi, yeyokuhombisa kuphela, ngaphandle kokusebenza.
Izinto eziphathekayo: iglasi engenawo umoya, intsimbi engenasici kunye nentambo ye-hemp, isitayile selizwe laseMelika.
Esi sibambi sekhandlela sinika ikhandlela, ndicebisa ukuba xa itshile ikhandlela, musa ukuhambisa sandla.
Ungayihombisa indawo yakho njenge-vase, ubeke isityalo, okanye ulinganise isityalo.
Ukuba ucinga ukuba ikhandlela lokwenyani liyingozi, ungabeka ikhandlela elektroniki.
Kwi-fashion nostalgia, abantu bale mihla baya besebenzisa isibane, amakhandlela ukuhombisa ikhaya, ukuphakamisa imeko-bume.
Made of Lead iglasi simahla
Uyilo oluBalaseleyo lwale mihla olwenziwe ziingcali
Yenzelwe ukusetyenziswa ngokulula kunye nokugcinwa, ilungele onke amaxesha